Abathengi bamashishini bahlukile! | Martech Zone
Abathengi bamashishini bahlukile!
NgoLwesibini, Januwari 13, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Umbhali-mbhali uBob Bly inike uluhlu lwezizathu zokuba kutheni ukuthengisa kumashishini kwahluke kakhulu kubathengi. Ndibhalile malunga ngenjongo kwizithuba ezidlulileyo, kwaye ndiyakholelwa ukuba lo ngumzekelo omhle. Inkqubo ye- ngenjongo umthengi weshishini wahlukile xa kuthelekiswa nabathengi:
Umthengi weshishini ufuna ukuthenga.
Umthengi weshishini uphucukile.
Umthengi weshishini uza kufunda ikopi eninzi.
Inkqubo yokuthenga kwamanyathelo amaninzi.
Iimpembelelo ezininzi zokuthenga.
Iimveliso zeshishini zinzima ngakumbi.
Umthengi weshishini uthenga kwinzuzo yenkampani yakhe? Kunye neyakhe.
Umnumzana Bly uya kwinkcukacha nganye kwezi kwaye wandisa uloyiko kunye nenkuthazo yomsebenzisi weshishini! Ukuphepha uxinzelelo okanye ubunzima, ukoyika okungaziwayo kunye noloyiko lokuphulukana nobunini kwinkqubo zizinto eziphambili ekufuneka uzigcine engqondweni kwintengiso kunye nenkqubo yokuthengisa.
Ukuba unemizuzu embalwa, qiniseka ukuba ulifunda lonke inqaku umahluko ophakathi kwesi-7 phakathi kwe-B2C kunye nabathengi be-B2B, iMithetho kunye naBantu bahluke kakhulu. Inokukunceda uphinde ucinge ngeendlela zakho!
tags: co-khangelamzantsiMari Smiththengisa i intanethikhawulezisa i-wordpressIntengiso yoBudlelwane eNtshaingxoxo yevidiyonkomfa yevidiyo
ICappuccino kunye namaxoki okupakisha
Jan 14, 2009 kwi-12: 37 AM
Iposi enkulu-nayo, umthengi weshishini uhlala enolwazi kwaye okona kubaluleke kakhulu, umthengi weshishini uyimfuneko!
Jan 14, 2009 ngo-2: 04 PM
Abathengi bethu ziinkampani zetekhnoloji ye-B2B ngokukodwa kodwa sijamelana nemiceli mngeni xa sithengisa iinkonzo zethu, njengayo nayiphi na enye inkampani, nokuba zikwindawo ye-B2B okanye ye-B2C. Olu luhlu luqulathe amanqaku abalaseleyo ekufuneka siwagcine engqondweni xa sinokuba noxinzelelo ngexesha lenkqubo yophuhliso lweshishini; amathemba ethu ahlukile kunabathengi, inqaku esilaziyo kodwa akulimazi ukukhunjuzwa ngalo lonke ixesha. Ndijonge phambili ekufundeni inqaku elipheleleyo- enkosi ngokuchaza.